မြ၀တီ ယနေ့ သတင်းများ | New Generation For Free Burma Media
← ရွေးကောက်ပွဲ ညပိုင်းအသံများ..
ဖောက်ခွဲရေးသမား ၀င်ရောက်ဟု ဆိုပြီး ကယန်းဒေသတွင် စစ်ဆင်ရေးထိုး →
မြ၀တီ ယနေ့ သတင်းများ
REUTER သတင်းဋ္ဌာနရဲ့ ယနေ့ မြဝတီမြို့က ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါ.. Burmese soldiers hold their weapons in Myanmar’s Myawaddi town မြန်မာအစိုးရစစ်သားတွေလို့ သုံးထားပါတယ်.
မြဝတီရောက်ခဲ့သူ တစ်ဦး။….။ ” ခုနပဲမြဝတီ ပြန်လာတယ်… အခြေအနေက ရှုပ်ထွေးနေတယ်…. စစ်တပ်နဲ့ DKBA အပြန်အလှန်ဝိုင်းထားတယ်.. ခုတော့ ညှိနှိုင်းနေတယ်.. ပြောတယ်.. ခုပဲပြန်လာတာ..”
မြဝတီသံဃာတစ်ဦး။…။ နေ့လည်က ရဲစခန်းနဲ့ မဲရုံတစ်ရုံကို ဘာတို့ ပစ်သွားတဲ့ သူတွေက တောထဲပြန်ရောက်နေပြီ.. ခုဟာကျန်ခဲ့တဲ့သူတွေ စစ်တပ်နဲ့ အပြန်အလှန်ဝိုင်းထားတယ်… ညှိနှိုင်းနေကြတယ်…။ ခုည စစ်တပ်က မြဝတီ ဈေးထဲဝင်နေပြီ..။ မြ၀တီမယ် လူတွေတော်တော်များများ ကြောက်နေကြတယ် ဒကာကြီးရေ.. မဲဆောက်ဖက်ကူးသွားတဲ့ သူတွေလည်းရှိတယ်..။
နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ သတင်းအရ မြ၀တီကို မီးဖြတ်ထားပြီး… မြို့ထဲမှာ စစ်အစိုးတပ်တွေ ကားနဲ့ ပတ်နေပါတယ်..။ ဒီကေဘီအေကလည်း အဓိကကျတဲ့နေရာတွေမှာ နေရာယူထားပါတယ်.. အခြေအနေတွေ အထူး ရှုပ်ထွေးနေကြောင်း သိရှိရပါတယ်..။
မြဝတီမှာ ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ ဂျပန် သတင်းထောက်အား ပြန်လွတ်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရှိရပါသည်.. အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်သတ်မှုရှိမရှိ မည်သူက စေလွှတ်ခြင်း ရှိမရှိအား မေးမြန်းပြီး ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်.
ယနေ့မြဝတီမြို့၌ မဲရုံများ အချိန်မတိုင်ခင် ပိတ်လိုက်တဲ့ အတွက် လူတော်တော်များများ မဲပေးခွင့် မရရှိခဲ့ကြောင်း မြဝတီ မြို့ခံတစ်ဦးမှ ပြောဆိုပါသည်…။
မြ၀တီမြို့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးချုပ် နှုတ်ခမ်းမွေး (ခေါ်) စောလဘွယ်မှ ပြောကြားချက်။
ကရင်ပြည်နယ် မြ၀တီမြို့တွင်းက အစိုးရရုံးတချို့ကို တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ သိမ်းလိုက်ခြင်း သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးချုပ် နှုတ်ခမ်းမွေး (ခေါ်) စောလဘွယ်မှ ပြောကြားချက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဗွီဘီသတင်းထောက် နော်နိုရင်း မေးမြန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသံဖိုင်အား ဒေါင်းလုပ် လုပ်ရန် – http://www.multiupload.com/V3GW0M2JO3
Filed under ဒီမိုဝေယံ, Niknayman